जापानी वसन्त कसरी रमाइलो गर्ने! चेरी फूल, नेमोफिला आदि। Best of Japan
एक जापानी महिला किमोनो लगाइरहेका चेरी ब्लास्म्स = शटरस्टक
यदि तपाईं वसन्त (जापान, अप्रिल, मे) मा जापान भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं केमा रमाउन सक्नुहुन्छ? यस पृष्ठमा, मँ परिचय दिन चाहन्छु जापानमा यात्रा गर्न कस्ता प्रकारका चीजहरू वसन्तमा लोकप्रिय छन्। वसन्त ,तुमा, तपाई धेरै फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै जापानमा चेरी फूल। जापानी द्वीपसमूह उत्तरदेखि दक्षिणमा धेरै लामो छ, त्यसकारण फूलहरू फूल्ने समयहरू देशभरि फरक फरक हुन्छन्। मेरो सिफारिश छ कि तपाईं फूलहरूको पूर्वानुमान जाँच गर्नुहोस् जहाँ तपाईं यात्रा गर्नुहुन्छ जहाँ फूलहरू फूल्दछन्।
मार्च, अप्रिल र मेमा जापानमा यात्राको लागि सिफारिश गरिएको
"HANAMI" चेरी फूलहरूको आनन्द लिनुहोस्
अन्य फूलहरू जस्तै शिबा चेरी रूख
वसन्त enjoyतुमा रमाईलो हिउँका दृश्यहरू
म जापानी वसन्त मा हरेक महिना को लागी लेख भेला। यदि तपाईं त्यस्ता विवरणहरू जान्न चाहानुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइड हेर्नुहोस् र तपाईंले भ्रमण गर्ने योजना गर्दै गर्नुहुने महिनामा क्लिक गर्नुहोस्। यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ जापानीहरूले कस्तो किसिमको लुगाहरू वसन्त wearingतुमा लगाउँदछन् भने, म लेख पनि लेख्छु जुन यी शीर्षकहरूमा छलफल गर्दछ, त्यसैले यी सुविधाहरू प्रयोग गर्न स्वतन्त्र महसुस गर्नुहोस्।
मार्चमा जापानको तापक्रम बिस्तारै ताप्दछ। बिस्तारै तपाईले धेरै न्यानो दिनहरू देख्नुहुनेछ, जुन भावनाले वसन्त आएको छ। यद्यपि तापक्रम प्राय: फेरि घट्छ। वसन्त नआउन्जेल दोहोरिने चक्रमा फेरि चिसो पाउन यो तातो हुन्छ। यदि तपाईं मार्च महिनामा जापान मा यात्रा गर्नुहुन्छ भने, तपाईं चिसो जापान र केही न्यानो जापान दुबै अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। चिसो क्षेत्रहरू जस्तै होक्काइडोमा, तपाईं अझै पनि जाडोको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईं सुन्दर फूल बगैचा र अधिक हेर्न चाहानुहुन्छ भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं दक्षिणी क्षेत्र जस्तै कुशु। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई केही सिफारिश गरिएका ठाउँहरू र गतिविधिहरू परिचय दिनेछु यदि तपाईं मार्चमा जापान भ्रमण गर्ने योजना बनाउनुहुन्छ। सामग्रीको तालिका मार्चमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी तपाइँ जापानमा अझै पनि जाडो खेल खेल्न सक्नुहुन्छ तपाईले सुन्दर फूल बगैंचा देख्न सक्नुहुन्छ मार्चमा राम्रो वर्षा हुन्छ त्यसैले मार्चमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको छाता सूचना तयार गर्नुहोस् यदि तपाईं टोकियो, ओसाका वा जाने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ भने मार्चमा होक्काइडो, कृपया तलका स्लाइडरमा थप जानकारीका लागि छविमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं अझै जापानमा जाडो खेल खेल्न सक्नुहुन्छ मार्चमा पनि होक्काइडो र होन्शु हिमालयहरू अझै पनि जाडोको अवस्थामा छ। यस कारणका लागि, मार्चमा स्की रिसोर्टहरू अझै खुला छन्। तपाईं स्कीइ,, स्नोबोर्डि,, स्लेडिding र यस्तै अन्य रमाईलो गर्न सक्नुहुन्छ। यद्यपि Niigata Prefecture जस्ता केही क्षेत्रहरुमा तापक्रम बिस्तारै बढ्नेछ। दिनको समयमा तपाईं हिउँ भन्दा पानी पर्न सक्ने बढी सम्भावना हुन्छ त्यसैले स्कीइ conditions् सर्तहरू बिस्तारै प्राप्त हुनेछ ...
अप्रिलमा, टोकियो, ओसाका, क्योटो र अन्य शहरहरूमा विभिन्न स्थानहरूमा सुन्दर चेरी खिल्यो। यी स्थानहरूमा मानिससँग भीडहरू छन् जो तिनीहरूलाई हेर्न बाहिर जान्छन्। त्यस पछि, नयाँ सिउँदो सहरले यी शहरहरू भर्नेछ। चाँडै, तपाईले धेरै नै काईका साथै फूल्दा ​​नेमोफिला फेला पार्नुहुनेछ। अप्रिलमा तपाईले धेरै रमाइलो यात्राको आनन्द लिनुहुनेछ। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई परिचय दिनेछु कि कस्तो प्रकारको यात्रा तपाईंले अप्रिलमा अपेक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। सामग्रीको तालिका अप्रिलमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी तपाईले केही स्की क्षेत्रमा वसन्त स्कीइंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ। तपाईले चेरी ब्लास्म्स, काई घाँस, र नेमोफिलाब्बर ट्राफिक जामको लोकप्रिय पर्यटन स्थलमा देख्न सक्नुहुन्छ अप्रिलमा टोकियो, ओसाका, होक्काइडोको जानकारी यदि तपाई योजना गर्नुहुन्छ भने। अप्रिलमा टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने क्रममा, थप जानकारीका लागि तलको स्लाइडरबाट छवि क्लिक गर्नुहोस्। तपाईं केहि स्की क्षेत्रमा वसन्त स्कीइiको मजा लिन सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, जापानी द्वीपसमूह हरेक वर्ष अप्रिलमा वसन्त प्रवेश गर्दछ, तर केहि स्की रिसोर्टहरू होक्काइडो र होन्शुको हिमाली क्षेत्रमा संचालन गर्न जारी राख्छन्। यहाँ, तपाइँ वसन्त स्कीइंगको मजा लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं बच्चाहरूसँग यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं स्लिड्डिंग वा स्की स्लोपमा हिममा केवल खेल्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ। वसन्त स्कीइ winter जाडो स्कीइ from भन्दा केही फरक छ। जाडोमा तपाईं सम्भावित धेरै चिसो मौसममा स्की गर्नुहुनेछ। यसको विपरित, वसन्त theतुमा तापक्रम थोरै तातो छ। स्की रिसोर्ट बाहिर बाहिर हिउँ चाँडो पग्लिहाल्छ र कहिलेकाँही सडकहरू र तपाईंको वरिपरिको क्षेत्रहरूमा मात्र थोरै हिउँ हुन्छ ...
ताजा हरियो दृश्य जापानी द्वीपसमूह मा मे जताततै सुन्दर छ। मैले अप्रिल पृष्ठमा भनेझैं, काई स्लिम र नेमोफिलाका फूलहरू राम्ररी फूल्न थाल्छन्। यदि तपाईं शिराकावागो जस्ता हिमाली क्षेत्रमा जानुहुन्छ भने, ताजा हरियो र हिउँको हिउँको भिन्नता हिमालहरूको रमाईलो हुनेछ। यस पृष्ठमा, म विशेष रूपमा मे महिनाको लागि सिफारिश स्थल भ्रमण स्पटहरू परिचय दिनेछु। टोकियो, ओसाका, होक्काइडोमा सामग्री जानकारी तालिकामा मेसिनो पग्लिने उच्च भूभागहरू जस्तै कमिकोची जस्ता धेरै सुन्दर जानकारीहरू छन् टोकियो, ओसाका, होकाइडो मा मेमा यदि तपाईं मेको टोकियो, ओसाका वा होक्काइडो जाने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको स्लाइडरबाट छवि क्लिक गर्नुहोस्। अधिक जानकारी को लागी। हिउँ पग्लने उच्च भूभागहरू जस्तै कामिकोची धेरै अप्रिलदेखि मेसम्म सुन्दर छन्, तपाईं जापानमा धेरै आरामसँग यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ। तापमान धेरै तातो वा चिसो छैन तर यो सहि छ। अपेक्षाकृत राम्रो मौसम देशव्यापी आनन्द लिन सकिन्छ। टोकियो, ओसाका, क्योटो, नारा, र हीरोशिमा जस्ता पर्यटन स्थलहरु यात्रुहरु को भीड को लागी यात्रा गरीरहेछ। सबै तरिकाले, कृपया जापानका विभिन्न स्थानहरूमा भ्रमण गर्नुहोस्। यदि तपाईं पर्याप्त समयको लागि यात्रा गर्नुहुन्छ भने, म होशुको पहाडी क्षेत्र टोकियो र क्योटो आदिमा जान सिफारिस गर्दछु। प्रत्येक वर्ष मेमा जापानको हिमालबाट हिउँ पग्लन्छ र पहाडबाट खोलाहरू बग्दछ। यी स्ट्रिमको आवाज धेरै शुद्ध छन्। हिमाली क्षेत्रहरूमा पनि रूखहरू एकैचोटि जीवित हुन्छन् जब जाडो समाप्त हुन्छ। यो ...
यदि तपाईं वसन्त (मार्च, अप्रिल, मे) को समयमा जापान भ्रमण गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ भने, यात्रा गर्दा तपाईंले कुन लुगा लगाउनु पर्छ? वास्तवमा, जापानी मानिस प्राय: वसन्त inतुमा के लगाउने भन्ने बारे चिन्ता गर्छन्। जे भए पनि तापक्रम बिस्तारै यस समयमा तातो हुनेछ, तर अझै पनि चिसो लाग्न सक्छ। जापानी मानिसहरु दिन बिहान मौसम पूर्वानुमान सुन्छन् र चिसो भइरहेको छ भने अक्सर कोटको साथ बाहिर जान्छ। यदि तपाईं वसन्त Japanतुमा जापान आउनुभयो भने, म तपाईंलाई सिफारिश गर्दछु कि तपाईं दुबै तातो र चिसो मौसमको कपडा तयार गर्नुहोस्। यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई जापानी वसन्त मा यात्रा को लागी लुगा को बारे मा उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ। मैले तल वसन्तको लुगाको फोटो पनि तयार गरें। सामग्रीको तालिका तपाईंले पातलो बाहिरी ज्याकेट पनि तयार गर्नुपर्दछ र यो चिसो हुँदा लगाउनु पर्छ। वसन्त inतुमा लगाउने लुगाका उदाहरणहरू तपाईंले पातलो बाहिरी ज्याकेट पनि तयार पार्नुपर्दछ र जाडो भएको बेला लगाउनु पर्छ। यदि तपाइँ मौसम र मौसम वर्णन गर्न मार्च र मेमा "स्प्रिंग" शब्द प्रयोग गर्नुहुन्छ भने पनि, तपाइँले लगाउने लुगा फरक फरक हुन्छन्। मार्चमा, त्यहाँ जाडो जस्तै चिसो दिनहरू छन्, त्यसैले यात्राको समयमा तपाईंले पातलो कोट (वसन्त कोट) वा जम्पर ल्याउनु पर्छ। विशेष गरी रातमा यो चिसो हुन सक्छ, त्यसैले सावधान रहनुहोस्। अप्रिलमा, यदि तपाईं रातमा चेरी ब्लास्म्स हेर्दा खान वा पिउनुहुन्छ भने तपाईं बाहिर जानु अघि पातलो कोट वा जम्पर राख्नु पर्छ। कोटको सट्टामा तपाईले आफ्नो घाँटीमा स्कार्फ लगाउन सक्नुहुन्छ इत्यादि। मेमा, त्यहाँ ...
यस पृष्ठमा, म तपाईंलाई विशेष रूपमा बताउन चाहन्छु जब तपाईं वसन्त inतुमा जापान आउँदा तपाईं केमा रमाउन सक्नुहुन्छ।
चेरी खिलने पंखुड़ियों स्ट्रिमिंग पानीमा तल झर्दै। हिरोसाकी कासल, जापान = शटरस्टक
टोकियो भीड चेरी ब्लासमस फेस्टिवलको मजा लिदै छ येनो पार्क = शटरस्टकमा
वसन्त Japanतुमा जापानको यात्राको लागि, म पहिले चेरी फूलहरूको सिफारिस गर्न चाहन्छु।
जापानलाई चेरी फूलहरू मन पर्छ। हामी धेरै चेरी ब्लास्म रूखहरू रोप्दछौं, र जब चेरी फूलहरू फूल्छन्, हामी सबै फूलहरू हेर्न रमाईलो गर्दछौं। जालीमा चेरी ब्लास्म्सलाई हेर्ने कार्यलाई "हानमी" भनिन्छ। "हानमी" शब्द जापान बाहेक अन्य देशहरूमा धेरै हदसम्म परिचित भैसकेको छ।
जापानमा, त्यहाँ पार्क र नदीपट्टि छन् जहाँ तपाईं कुनै पनि क्षेत्रमा "हानमी" को मजा लिन सक्नुहुन्छ। यी पार्कहरूमा, हामी बस्न, स्वादिष्ट खाना खान र मदिरापान गर्न चेरी रूखहरूको मुनि प्लास्टिकको टार्प्सहरू फैलाउँदछौं। यो दृश्य धेरै देश भ्रमण गर्ने पर्यटकहरूलाई धेरै विरलै लाग्न सक्छ। अवश्य पनि, तपाई धेरै जसो पार्कमा चेरी फूलहरू स्वतन्त्र रूपमा हेर्न मजा लिन सक्नुहुन्छ!
तपाईं जापान आउनुहुँदा तपाईं कहाँ चेरी फूलहरू देख्न सक्नुहुन्छ? दुर्भाग्यवश, चेरी फूलहरू अधिकमा केवल केहि हप्ताको लागि खिलछन्। चेरी फूलहरू वर्षा र हावाको कारण धेरै छिटो छरिएका छन्।
यदि तपाईं टोकियो, क्योटो, ओसाका आदिको भ्रमण गर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मार्च को अन्त्यदेखि अप्रिलको सुरुसम्म जापान भ्रमण गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। त्यसो भए तपाई "हनामी" लाई अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
यदि तपाईं जापानको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ यस समयमा, जब तपाईं भ्रमण गर्नुहुन्छ, जाँच्नुहोस् जापानमा चेरी फूल कहाँ फूलेको छ।
जापानको दक्षिणी भाग जस्तै कुशु र शिकोकूमा मार्च महिनाको अन्तदेखि नै चेरी फूलहरू फूल्न थाल्छन्। होरीकाडोमा अप्रिलको उत्तरार्द्धबाट चेरी फूलहरू फूल्न थाल्छन्। होक्काइडोको उत्तरी भागको साथसाथै हिमाली क्षेत्रमा तिनीहरू मेको पहिलो आधा मा खिलछन्।
जापानमा चेरी फूलहरू साँच्चै सुन्दर छन्, त्यसैले कृपया उनीहरूको बिभिन्न क्षेत्रमा आनन्द लिनुहोस्।
कुहिरो वसन्त बगैंचामा फक्रिएको विशाल चेरी रूखको सुन्दर फूलहरू ~ मताबेई-जाकुरा उदा शहर, नारा, कन्साई क्षेत्र, जापानको ग्रामीण क्षेत्रमा 300०० वर्ष पुरानो चेरी रूख हो = शटरस्टक
Gifu प्रान्तमा Shirakawago। हिउँ अझै पनि वरपरको पहाडहरूमा रहन्छ = शटरस्टक
माउन्ट फुजी र शिबा चेरी फूलहरू (काई फ्लोक्स, काई गुलाबी, माउन्टेन फ्लोक्स)। जापान प्रतिनिधित्व एक शानदार वसन्त परिदृश्य = शटरस्टक
जापानमा तपाईले चेरी फूलका अलावा वसन्तका धेरै फूलहरू पनि रमाउन सक्नुहुन्छ। प्रतिनिधि एक काई घाँस चेरी रूख हो शिबा चेरी फूलहरू भनिन्छ। तपाईं दृश्यको सराहना गर्न सक्नुहुन्छ जहाँ गुलाबी सुन्दर फूलहरू माथिको फोटो जस्तो चारै तिर फैलियो। टोकियो र अन्य क्षेत्रहरूमा अप्रिल देखि मे सम्म शिबा चेरी खिलछन्।
हिब्रूमा हिताची समुद्री किनार पार्कमा नेमोफिला इबाराकी, जापानको नीलो आकाशको साथ वसन्तमा = शटरस्टक
भर्खर, विदेशबाट आएका पर्यटकहरूका बीच धेरै लोकप्रिय फूल नेमोफिला हो। इबाराकी प्रान्तको हिताची समुद्री किनार पार्कमा, अप्रिलको मध्यदेखि मेको सुरूवातसम्ममा तपाईंले वरपरको फोटो जस्तो नीलो फूलहरू पलाउन सक्ने दृश्यहरू देख्न सक्नुहुन्छ।
क्योटोमा किफ्यून तीर्थ जहाँ ताजा हरियो सुन्दर छ = एडोब स्टक
Chusonji मन्दिर ताजा हरियो रूखहरु द्वारा घेरिएको, Hiraizumi, Iwate प्रान्त = एडोब स्टक
जापान को आसपास यात्रा को लागी वसन्त एक उत्तम मौसम हो। मैले परिचय दिएका फूलका ठाउँहरू बाहेक धेरै मन्दिर र मन्दिरहरू, इत्यादि, त्यहाँ ताजा हरियो छ जसले धेरै नै सुन्दर दृश्य सिर्जना गर्दछ। सुन्दर फूल र ताजा हरियो वसन्त मा तपाईंलाई स्वागत छ। कृपया जापानको आनन्द लिनुहोस्!
तात्यामा कुरोबे अल्पाइनको हिउँ पर्खाल पर्खाल निलो आकाश पृष्ठभूमि संग टोयामा प्रान्त, जापानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र लोकप्रिय प्राकृतिक स्थान मध्ये एक हो। शटरस्टक
वसन्तमा, जापान सामान्यतया न्यानो हुन्छ र बाहिर समय खर्च गर्न सजिलो हुन्छ। यद्यपि तपाईं अझै वसन्त snowतुमा हिउँ परिदृश्यको आनन्द लिन सक्नुहुनेछ। जापानमा धेरै हिमाली क्षेत्रहरू छन् र वसन्तमा पनि यस्तो हिउँ सजिलै पग्लिन सक्दैन। यदि तपाईं यी हिमाली क्षेत्रहरू मध्ये कुनै एक अवलोकन ठाउँमा जानुभयो भने, तपाईं जाडो बाहिर जाडो चिसो संसारको अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
मैले सिफारिस गरेको पर्यटन स्थल टोयामा प्रान्तको टटेयामा हो। यहाँ तपाईं हिउँको भित्ता देख्न सक्नुहुन्छ जुन लगभग २० मिटर अग्लो देखि अप्रिलको मध्यसम्म (जुन वर्षमा निर्भर गर्दछ) बीचमा छ। यो एकदम गहिरो हिउँ पर्ने क्षेत्र हो र जब स्नोफ्लोले सडकमा हिउँ हटाउँछ भने सडकको दुवै पट्टि हिउँको पर्खाल गठन हुन्छ। तपाईं यस बस खण्डबाट करीव meters०० मिटरको लागि सडकमा हिंड्न रमाउन सक्नुहुन्छ।
जापानमा विभिन्न स्प्रि enjoyहरूको मजा लिन कृपया यस अवलोकन जानकारी प्रयोग गर्नुहोस्!